Arduino ပစ္စည်းများနှင့်ပျဉ်ပြားများကိုဤလောကတွင်စတင်ရန်။ | အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
HWLibre တွင်စျေးကွက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့် Arduino ရွေးချယ်မှုများအနက်တစ်ခုပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ဆောင်ရွက်သောစီမံကိန်းများစွာရှိသည်။ အမှန်တရားကဖြစ်နိုင်ချေတွေများတယ်၊ တစ်ခုချင်းစီတွင်တစ်ခုချင်းစီသည်၎င်း၏ထူးခြားချက်များရှိပြီးစီမံကိန်းတစ်ခုကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်အခြားသူများထက်များသောအားဖြင့် ပို၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရှိသည် ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများသည်။
ဒီနေ့ဒီနေ့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခဏတာရပ်တန့်ချင်ကြပြီး၊ မတူညီသောပရောဂျက်များအကြောင်းဆက်ပြောမည့်အစားလေအနည်းငယ်ယူပြီးအလွန်ရိုးရှင်းသောအကြောင်းအရာနှင့်ဆွေးနွေးရန်တွေ့ဆုံကြသည်။ ဤကမ္ဘာတွင်ကျွန်ုပ်တို့စတင်သောအခါကျွန်ုပ်တို့အားအကျိုးပြုလိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ စာသားအတိုင်းကူညီပေးပါ ဘယ်ကစရမလဲဤဖျော်ဖြေမှုနှင့်အပျော်အတက်လောက၌စတင်နေသောသူများအတွက်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဤအချက်ကိုရောက်ပြီဆိုလျှင်အသိပညာအချို့ရှိနိုင်သောအရာအားလုံးကိုသင်အလွန်စိတ်အားထက်သန်လိမ့်မည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်စက်ရုပ်ကိုဖန်တီးရန်၊ သင့်အိမ်တွင်သင်လုပ်ဆောင်သောနေ့စဉ်လုပ်ဆောင်မှုများကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်နှင့်အားလုံးအတွက် ဤသည်အလွန်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲပလက်ဖောင်း၏အသုံးပြုမှုကိုကျေးဇူးတင် ငါတို့စရပါ့မလား
1 မတူညီတဲ့ Arduino ဘုတ်အမျိုးအစားတွေရှိတယ်၊ ဘယ်တစ်ခုကိုငါရွေးရမလဲ။
1.1 တရားဝင် Arduino ပျဉ်ပြား
1.2 Arduino သဟဇာတပျဉ်ပြား
2 အကြံပြု starter ပစ္စည်းများ
မတူညီတဲ့ Arduino ဘုတ်အမျိုးအစားတွေရှိတယ်၊ ဘယ်တစ်ခုကိုငါရွေးရမလဲ။
သင်ဘာလုပ်ချင်သည်ကိုသင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ ပထမဆုံးခြေလှမ်းမှာမည်သည့် Arduino ဘုတ်ကိုသင်ရွေးချယ်ရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ မယုံသည်ဖြစ်စေအမှန်တရားကဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာသင်ရရှိပြီးသည့်နောက်ဆုံးရလဒ်၏အခြေခံဖြစ်သည် ၎င်း၏ဗိသုကာသင့်ရဲ့စိတ်ကူးများအတော်လေးနည်းနည်းကန့်သတ်နိုင်ပါတယ် စီမံကိန်းကိုပုံဖော်နိုင်ရန်သင်ချမှတ်နိုင်သောဖြေရှင်းချက်အားလုံးအထက်တွင်ရှိသည်။
အလွန်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုမှာအရွယ်အစားနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသာမကသင်ချိတ်ဆက်နိုင်သည့်အရာများသာမကဘဲ Arduino ကိုဝယ်ယူရန်မိမိကိုယ်ကိုကန့်သတ်ထားရုံသာမကဘုတ်အဖွဲ့ကိုယ်တိုင်သာမကကျွန်ုပ်သည်တရားဝင်ဘုတ်အဖွဲ့သာမကဤတရားဝင်မော်ဒယ်များကိုဆိုလိုသည်။ ဒီသဟဇာတဖြစ်သည့်ဘုတ်များအားလုံးကမ်းလှမ်းသည့်အရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်တိကျသောအရွယ်အစားနှင့်အမျိုးအစားတစ်မျိုးမျိုးကိုလိုအပ်သည်။ တရားဝင်ဘုတ်အဖွဲ့က၎င်းကိုမပေးနိူင်ပါ.
တရားဝင် Arduino ပျဉ်ပြား
Arduino, နှစ်ပေါင်းများစွာ (က 2006 ကတည်းကစျေးကွက်အပေါ်ခဲ့သည်) တစ်ခုတည်း format နဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်မှဖြစ်ခြင်းမှသွားပြီ မနည်း 12 ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းအတွက်ယနေ့ရရှိနိုင် အချိန်ကာလရောက်လာသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ရပ်စဲထားပြီးဖြစ်သောသူများကိုထည့်နိုင်သည်။ သင်လိုအပ်ချက်နှင့်အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်သည့်ဘုတ်ကိုသင်မတွေ့ပါက၊ Arduino သည်၎င်း၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်မှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေ၊ ၎င်း၏တရားဝင်ဖြန့်ချိသူများထံမှတရားဝင်ရောင်းချသည့်ထပ်တိုးများ၊ တိုးချဲ့မှုများနှင့်ပစ္စည်းများအနက်မှတစ်ခုကိုရနိုင်သည်။
ဒီပုံမှာ၊ အရင်ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း၊ Arduino ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့ရွေးချယ်မှုများအကြားခြားနားချက်များဟာအဓိကအားဖြင့် Analog နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်သွင်းအားစုများနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏အရွယ်အစား၊ ဆက်သွယ်မှုနှင့်အရေအတွက် ရွေးကောက်တော်မူသောပန်းကန်နှင့်အတူ။ ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်တစ်ခုမှာဘုတ်ကိုယ်နှိုက်မှပေးသောအတွင်းမှတ်ဉာဏ်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့တည်ဆောက်မည့်စီမံကိန်းသည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော (ကုဒ်အဆင့်တွင်) ပိုမိုမှတ်ဥာဏ်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည့်အမျိုးမျိုးသောရွေးချယ်မှုများအနက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်သည် ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။သံသယမရှိဘဲအခြေခံအကျဆုံးပုံစံနှင့်အလှည့်များတွင်သွင်းအားစုများနှင့်ရလဒ်များအများဆုံးအရေအတွက်ရှိသည့်ပုံစံကိုသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ကျနော့်အမြင်အရဆိုရင်ခင်ဗျားကစမယ်ဆိုရင်အဲဒါဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။
အဆင့်တစ်ဆင့်မြင့်တက်လာသည် Arduino သုညတကယ်လို့မင်းမှာ CPU နဲ့ RAM ရော RAM ရောပိုကောင်းတဲ့ memory ရှိတာကြောင့် power ပိုလိုအပ်ရင်ပိုကောင်းတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသော modules များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် digital inputs များသင်လိုအပ်ပါကအကောင်းဆုံးတစ်ခုမှာတစ်ခုရရှိရန်ဖြစ်သည် Arduino Mega.
ဒီနေရာမှာကံမကောင်းတာကအချက်တစ်ချက်ကိုအသေးစိတ်စဉ်းစားရမယ် စျေးကွက်ထဲမှာ Arduino ပျဉ်ပြားအတုအများကြီးရှိတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက၎င်းတို့သည်မှန်ကန်သည် (သို့) မှားသည်ကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်ရှာဖွေရန်အလွန်ခက်ခဲနိုင်သည် Arduino Uno။ ဒုတိယအချက်အနေနဲ့၊ Arduino ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဈေးကွက်အတွက်သာရည်ရွယ်သည်။ အပြင်ဘက်တွင်အမှတ်တံဆိပ်ကို Genuine အဖြစ်ရောင်းချသည် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှစ်ခုလုံးသည်တရားဝင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းပြissuesနာများကြားတစ်ခုတည်းသောကွာခြားချက်။
ထိုအချိန်တွင်အထူးသဖြင့်အီလက်ထရောနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ လုံလောက်သောဗဟုသုတရှိလျှင်၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘုတ်အဖွဲ့ကို Arduino ပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်သဟဇာတဖြစ်အောင်လုပ်ရန်ပင်စဉ်းစားနိုင်သည်။ ဤသည်မှာထုတ်လုပ်သူများစွာ၏နောက်လိုက်လိုက်သောအကြံအစည်ဖြစ်သည်။ စာသားများသည်ဤပလက်ဖောင်း၏ဆွဲဆောင်မှုနှင့်ကျော်ကြားမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးဖြေရှင်းနည်းများကိုကမ်းလှမ်းရန်ဖြစ်သည်။ တစ် ဦး မှအပြည့်အဝသဟဇာတ စျေးချိုသော.
ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သောသဟဇာတဖြစ်သောပြားများထဲမှ၊ သင့်ကိုခွင့်ပြုသည့်အရာသည်ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်အရအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းခွဲခြားရန်လိုအပ်သည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပတ်ဝန်းကျင်အသုံးပြုပါ Arduino IDE ကို Hardware အဆင့်တွင်၊ သူတို့သည်သင့်အားအထူးသဖြင့်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ တူညီသော hardware ကိုသုံးရန်ခွင့်ပြုထားသော်လည်း၊ အစိတ်အပိုင်းများတွင်သင်သည်ကွဲပြားခြားနားသောအဆိုပြုချက်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်လုပ်သူများစွာကိုလည်းတွေ့လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သောကွဲပြားခြားနားသောဥပမာများအနက်လူသိအများဆုံးထင်ရှားသည့်အထူးသဖြင့်ရပ်ရွာလူထုနှင့်အထူးသဖြင့်တည်ရှိပြီးရပ်ရွာလူထုမှနည်းပညာအထောက်အပံ့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်မေးခွန်းများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
ဖရီးဒိုးနို: လူသိအများဆုံးဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်မှာဤ Arduino-လိုက်ဖက်သောမိသားစုသည်မူရင်းဗားရှင်းများနှင့်တူညီသောပြားပြားပြားပြားများစွာရှိသည်။ အများဆုံးအကြံပြုထားတဲ့မော်ဒယ်ကတော့ဒေါ်လာ ၄၄ ကျသင့်တဲ့ Arduino Mega နဲ့သက်ဆိုင်တယ်။
Zigduino မူရင်းစျေးနှုန်းနှင့်အတူတူနီးပါးစျေးနှုန်းအတွက်အပိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပေါင်းထည့်သောလိုက်ဖက်သောမော်ဒယ်များတစ်ခု။ ဤကိစ္စတွင် Zigbee ဆက်သွယ်မှုကိုဒေါ်လာ ၇၀ ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
မင်္ဂလာပါ: နှင့်သဟဇာတမော်ဒယ်တစ်ခုမှာ Arduino Uno သင်တတ်နိုင်သမျှစျေးအသက်သာဆုံး ၎င်းသည် ၇ ယူရိုထက်လျော့နည်းပြီးဗားရှင်းများစွာနှင့်သဟဇာတဖြစ်သောမော်ဒယ်များရှိသည်။
Freaduino သင်မြင်သည်အတိုင်း, သဟဇာတပျဉ်ပြား၏လှည့်ကွက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှုပ်ထွေးမှုများအားသာချက်ယူဖြစ်ကောင်းနာမကိုအမှီရှုပ်ထွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤပုံစံသည် Uno ဘုတ်နှင့်တူညီသော်လည်း ၁၈ ယူရိုသာရှိသည်။
SaintSmart Arduino Mega 2560 နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောကြောင့်ယူရို ၂၀ အောက်လျော့နည်းပါသည်။
xcSource: ၎င်း၏စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးမော်ဒယ်များတစ်ခုမှာ၎င်းနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည် Arduino Unoနှင့် 12 ယူရိုထွက်လာပါတယ်။
BQ Zum Core ဖြစ်သည်: ဒီဘုတ်အဖွဲ့ကအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပေမယ့်အမှန်တရားကတော့ Arduino နဲ့လုံးဝမကိုက်ညီတာကိုသတိပြုသင့်ပါတယ်။ စိတ်ကူးကဒီရွေးချယ်မှုပြီးတဲ့နောက်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးကိုဖန်တီးပြီးသင်က module တွေ၊ သင်ခန်းစာတွေ၊ အထောက်အပံ့တွေနဲ့ Arduino board တွေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ programming environment ကိုတောင်ရှာလို့ရတယ်။
အကြံပြု starter ပစ္စည်းများ
ငါတို့စီမံကိန်းအတွက်ဘယ်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ပြီးတာနဲ့သူကတရားဝင်ဖြစ်စေ၊ သဟဇာတဖြစ်စေ၊ ကိရိယာအစုံဝယ်ဖို့အချိန်တန်ပြီ။ အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဘုတ်အဖွဲ့ကိုရွေးချယ်ရာတွင်ဤသည်ဘုတ်ပြားဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆော့ဖ်ဝဲကို ၄ င်း၏မှတ်ဉာဏ်ထဲသို့ထည့်ရန်သို့မဟုတ် ၄ င်း၏ပါဝါထောက်ပံ့မှုကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးသော modules များသို့ပိုမိုအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝစေရန်ထောက်ပံ့ပေးမည့် USB cable ကဲ့သို့သောအခြားအရာများလိုအပ်သည်။ စီမံကိန်းတစ်ခုလုံး။
မိမိကိုယ်ကိုအလွန်အမင်းရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိစေရန်အတွက်စီမံကိန်း၏တောင်းဆိုချက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်များကိုမလိုအပ်သည်ကိုတိတိကျကျနားလည်စေနိုင်သဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်တရားဝင်စတိုးဆိုင်သို့မဟုတ်ဖြန့်ချိသူမည်သူမဆိုတွင်သင်ရှာတွေ့နိုင်သည့် starter ပစ္စည်းများအချို့ကိုမှတ်ချက်ပေးလိမ့်မည်။ အမှတ်တံဆိပ်သည် Arduino ကိုယ်တိုင်နှင့်၎င်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသည့်ပျဉ်ပြားနှစ်ခုလုံးမှဖြစ်သည်။ ဤအဓိပ္ပာယ်အရ, ကိရိယာအစုံတွင်ထည့်သွင်းထားသည့်အစိတ်အပိုင်းများပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည် ပိုမို၍ ဈေးသက်သာလိမ့်မည်။ ရွေးချယ်ရန်အလွန်များပြားပြီးအမျိုးမျိုးရှိသည်။
Arduino တရားဝင် Kit: စပိန်ဘာသာဖြင့်နှင့်လက်စွဲနှင့်အမျိုးမျိုးသောစီမံကိန်းများတပ်ဆင်ရန်တပ်ဆင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
kit Arduino Sparkfun ဗားရှင်း ၃.၂: ပထမဆုံးပရိုဂရမ်နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ရန်အတွက်ပထမဆုံးသောပရောဂျက်များအတွက်သင်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးနှင့်စတင်သူများအတွက်အလယ်တန်းအဆင့်နှင့်တရားဝင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်။ ၎င်းတွင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၌လက်စွဲစာအုပ်အပြည့်အစုံပါ ၀ င်သော်လည်းစပိန်ဘာသာကိုအွန်လိုင်းတွင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။
Arduino Starter Kit: အရည်အသွေးအာမခံချက်နှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသော starter ကိရိယာအစုံ။ ဒီဟာရောင်းတဲ့ပစ္စည်းပါ www.arduino.org မှာ (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပရှိ Arduino အမှတ်တံဆိပ်ကိုထိန်းချုပ်သောကုမ္ပဏီ) ။ ဒီကိရိယာတွင်စပိန်ဘာသာနှင့်လက်စွဲစာအုပ်ပါဝင်သည် Arduino UNO နှင့်များစွာသောစပိန်ဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်မှာမူရင်းအဖြစ်ရောင်းချခဲ့သည်။
နှင့်သဟဇာတ Kit Arduino Uno R3: လက်တွေ့ကျတဲ့အမှု၌အစိတ်အပိုင်းများ 40 ပါရှိသည်။ ဒါဟာစျေးအသက်သာဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။
ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။: သငျသညျ Funduino သဟဇာတဘုတ်အဖွဲ့ကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်, ဒီကိရိယာအစုံသီးခြားဘုတ်အဖွဲ့ထက်ပိုကောင်းတဲ့ option ကိုဖြစ်ပါတယ်။
Kuman စူပါ Starter Kit: အစပြုသူတွေအတွက်အကောင်းဆုံး။ တရားဝင်မဟုတ်သောသဟဇာတဖြစ်သော Arduino ပစ္စည်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်စီမံကိန်းများအတွက်အစိတ်အပိုင်း ၄၄ ခု၊ သင်ခန်းစာများနှင့်အရင်းအမြစ်ကုဒ်များပါဝင်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။: ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်အသစ်ပြုပြင်ထားသောကိရိယာနှင့်ယခင်အစိတ်အပိုင်းများထက်ပိုသောအစိတ်အပိုင်းများ (အစိတ်အပိုင်း ၄၉ ခု) ရှိသည်။ Arduino နှင့်သင်အပြည့်အဝပါ ၀ င်ရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးနှင့်ပြည့်စုံသည့်ဤစီမံကိန်းတွင်စီမံကိန်း ၂၀ ကျော်ပါဝင်သည်။
SainSmart အခြေခံပညာ Starter Kit: တစ် ဦး ကကိရိယာအစုံ Arduino UNO စျေးနှုန်းညှိနှိုင်းမှုနှင့်သင်ခန်းစာများကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်စီမံကိန်း ၁၇ ခုကိုစတင်စမ်းသပ်ရန်နှင့်သင်စတင်ရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးနှင့်အတူ။ ၎င်းတွင်တစ်ဆင့်ချင်းသင်ခန်းစာပါသောလက်စွဲစာအုပ်မပါ ၀ င်သော်လည်း၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပြီးယူကျု့တွင်လည်းချန်နယ်တစ်ခုရှိသည်။
Zum Kit ပါ: အလွန်ဂရုတစိုက်တင်ဆက်မှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်အရည်အသွေးအစိတ်အပိုင်းများကိုအတူ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » Arduino » Arduino ဖြင့်စတင်ခြင်း - မည်သည့်ဘုတ်များနှင့်ပစ္စည်းများသည်စတင်ရန် ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်နိုင်သနည်း
ကွဲပြားခြားနားမှုမူရင်းပြားနှင့်မိတ္တူများ၊ ပန်းကန်တစ်ခုနှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဆော့ဗ်ဝဲအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောသောအခါ၎င်းသည်အနည်းငယ် squeaks …။ အထူးသဖြင့် arduino တီထွင်ခဲ့သောမူရင်းအဖွဲ့ ၀ င်အများအပြားသည် arduino ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်မူပိုင်ခွင့်ရုံးသို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းချဉ်းကပ်လာသောအခါ။
Arduino နှင့် Lion2ကြားရှိပေါင်းစပ်မှုသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ 3D ပုံနှိပ်ခြင်းများသည်ဤစက်ကိရိယာများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးထို့နောက် Arduino နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သည်။
ဤအရာများသည် Raspberry Pi3Model B + ကမ်းလှမ်းသောသတင်းများဖြစ်သည်